Iindaba -Iibhokisi eziQinisekileyo zeZipho zeNdalo
Yintoni ibhokisi eqinileyo?
Iibhokisi eziqinileyo zezinye zezona ndidi zifunwayo zebhokisi yokupakisha. Phantse zonke iimveliso zodidi zisebenzisa ukupakisha okungqongqo kumanqaku abo abizayo kwaye athambileyo. Ukupakisha ibhokisi eqinileyo kuyaziwa ngokuzinza kwayo, ukuthembeka, ukomelela kunye nolwakhiwo oluqinileyo. Ezi dielectri zebhokisi engqongqo yeebhokisi zijolise kwiphepha elisongelayo elisetyenziselwa ngaphandle kwe-chipboard enzima (iphaneli engwevu) enika iibhokisi ubume bazo. Ezi bhokisi zangaphakathi zingqongqo zinamaphepha okugcina ukubonakala okufanayo ngexesha lokutyhila. Ukuze ube namava afanelekileyo okupakisha, sinokucebisa ukuba uhlala uprinta i-dielectric ngaphambi kokuba uqhubeke. Oku kuyakukunika umbono malunga nobukhulu, ubukhulu, amava omsebenzisi, njl.njl. Kananjalo, uya kuqonda nokuba ibhokisi iyazifezekisa na iimfuno zakho zesakhiwo okanye hayi.
Yeyiphi ibhokisi ebambekayo yokupakisha enikezelayo?
Iibhokisi ezomeleleyo zesiko zibonelela ngayo yonke inkululeko enokubakho yokupakisha okwenzelwe wena. Ukusuka ekuvalweni ukufakela iinxalenye kwinkxaso yangaphakathi kunye neenketho zebandla, ufumana inkululeko yokwenza ngokwezifiso zonke iinkalo. Iibhokisi eziqinileyo ezishicilelweyo zinezibonelelo ezinkulu njengesisombululo sokupakisha, yiyo loo nto lonke uphawu lukhetha ukusebenzisa ezi bhokisi zishicilelweyo. Nangona kunjalo, zizinto zokunethezeka ezimbalwa abanokuzifikelela. Ezi bhokisi zenziwe ngqongqo zibonelela ngokhuseleko olukhulu kunye nokhuseleko. Imveliso yakho ihlala ikhuselekile xa ikwezi bhokisi. Ngapha koko, abathengi bakho bafumana olona lonwabo kunye nolonwabisayo. Qaphela ukuba zonke iibhokisi zodidi olungqongqo zivela kwiibhokisi ezisikiweyo kwangaphambili.
Ukusetyenziswa okuqhelekileyo kweebhokisi eziqinileyo
Esona sibonelelo siphambili kwiibhokisi eziqinileyo zeLuxury kukuba zenziwe ngokulula ngokulula. Ungaprinta yonke into ukusuka kwiilogo ukuya kumagama ebhrendi ukuya kwii-silhouettes zomfanekiso wakho wegama. Ezi bhokisi zexabiso eliphambili zinokulungiselela zonke iinkalo zeshishini lokuprinta. Nanga amanye amanqaku aphambili kunye nezibonelelo zebhokisi e-Luxury eqinileyo: Ukuprintwa kombala kuyafumaneka, ukuPrinta, ukunyathela, kunye nabanye. Nokuba yeyiphi indawo esetyenzisiweyo (ukwenziwa ngokwezifiso kubo bonke ubuso obunokubakho) Indlela yokuhambisa kunye nokudityaniswa kweebhokisi eziqinileyo zihlangene ngokupheleleyo okanye ngokuyinxenye. Ifumaneka kuzo zonke iimilo kunye nezitayile onokucinga ngazo
Ukugqitywa kodidi oluphezulu ngokwezifiso .Zinokuhonjiswa ngezixhobo ezinjengeeribhoni njl njl. Amanqaku angasebenzisa iibhokisi zethu zodidi ezihombisayo ukubonisa kunye neepakethi, iziqholo, iiwotshi, iimpahla, iitshokholethi, izipho kunye nezinye izinto zodidi. Ibhokisi ehanjisiweyo ihlanganisiwe. Kukho izibonelelo zokufumana iibhokisi ezihlanganisiweyo ezinje ngomzamo omncinci kunye nexesha elichithwe ekuhlanganiseni emva kokufumana. Nangona kunjalo, ngeebhokisi ezihlanganisiweyo, kuya kufuneka ugcine engqondweni ubungakanani beodolo yakho njengoko ivolumu inokunyanzeliswa. Iibhokisi eziMandla eziMandla, Iibhokisi zeDraw ezomeleleyo, Iibhokisi eziqinileyo ezinesiciko, Iibhokisi eziQinisekisiweyo eziQokelelweyo, Iibhokisi eziQinisekisiweyo ezihanjisiweyo, ziQinisekile Iibhokisi ezivelelayo, Kungcono uku-odola iibhokisi ezithe tyaba njengoko iibhokisi zezipho zihlanganisiwe zihlala zinobunzima kakhulu. Iibhokisi zeeflethi kufuneka zihlangane kwimizuzu nje kwaye kulula nokuzigcina xa kuthelekiswa neebhokisi eziqinileyo.
Izitayile zebhokisi eziqinileyo
Ukupakishwa kwebhokisi eqinileyo kuluhlu olubanzi lweendlela kunye neemilo. Ukukhethwa kwesitayile semilo kunye noyilo kuxhomekeke kuwe kwaye ngokwendlela yokuqonda uphawu lwakho. Siza kuxoxa ngeendlela ezimbalwa ezibalulekileyo kwizisombululo zokupakisha eziqinileyo. Ibhokisi eqinileyo enesiciko sokuvala semagnethi Yintoni intsingiselo yokupakisha kwe-e-commerce? Yibhokisi eqinileyo enesiciko sokuvala ngemagneti. Uyilo olunobunkunkqele bokuthwala ibhokisi engqongqo egqityiweyo lubonelela ngamava ehlabathi kubathengi. Ibhokisi enqabileyo enobunkunkqele enesiciko esivaliweyo semagnethi sisisombululo esifunekayo kwishishini ngalinye elijongana nabathengi beklasi ephezulu. Unako ukugqiba i-matte okanye i-glossy, i-logo yenkampani yakho ifakwe okanye isitampu eshushu ngaphambili nangaphezulu, yenza i-classic ngakumbi ngemibala oyikhethayo. Iibhokisi ezinamandla ezinokuphinda ziboshwe okanye iibhokisi ezinamandla ezisongiweyo ziya zithandwa kule mihla. Ababizi kakhulu, xa kuthelekiswa nebhokisi engqongqo enesiciko sokuvalwa kwemagnethi. Njengenkampani yokungenisa elizweni, umntu unokugcina kakhulu ngokutshintshela kwiibhokisi ezinamandla ezisongiweyo. Ubungcali bethu bulele kwizimbo ezimbini ezithandwayo kwaye zombini zinokulungiselela zonke iintlobo zokwenza umntu kunye nokwenza ngokwezifiso. Iibhokisi eziqinileyo ezinokusongelwa kulula kakhulu kwisitokhwe kwaye kulula ukudibana nazo. Awudingi xesha lide ukuyilungiselela abathengi. Zive ukhululekile ukusazisa ukuba ufuna ingcebiso malunga nesisombululo sokupakisha iphepha. Ibhokisi engqongqo yezithambiso Uyilo lwesiko lokupakisha lukwakhona. Umthengi wethu ukhetha umxholo olula nonyulu wezisombululo zokupakisha kwezithambiso, ngenxa yoko bakhetha uyilo olumhlophe olucocekileyo lweedrowa. I-UV emhlophe emhlophe ecwebezelayo ihambelana ngokugqibeleleyo nemveliso yazo yendalo kunye nendalo. Olunye loyilo olunempembelelo kwezi bhokisi zilukhuni kukuba ube namabhanti angaphandle kuprintwe ngeCMYK eyahlukileyo. Uyilo lokuprinta lwenza ukuba iibhokisi zokugcina zinomdla, zintsha kwaye zinamandla eziza kutsala umdla wabantu abakhathalela inkangeleko yabo. Iibhokisi zesiko esiqinileyo zibonelela ngokuguquguquka kwimveliso yakho ukugcina imveliso ekukhanyeni nakwezinye izinto zokusingqongileyo kunye nokhuseleko kunye nokukhuselwa kwiibhotile zakho zeglasi. Iibhokisi ezinamatye anqabileyo. Iibhokisi ezihonjiswe ngokungqongqo ngamatye anqabileyo luluhlu lwempahla yoyilo yohlobo lwebrand jewelry. Izinto ezingaphakathi ngamacici, izacholo zomqala, izacholo, nezinto zokuhombisa. Zonke iibhokisi ziqulathe ukufakwa kwevelvet emnyama okususwayo ukubonisa imveliso. Unokwenza ulwenziwo lwakho ngokombala, izinto zelogo, kunye nokugqiba. UkuPhawula okuTshisayo okanye i-Spot UV ekuqaqambiseni uphawu lwakho usebenzisa iphepha elishicilelweyo elinepateni yombala ibhokisi yesipho yebhokisi yebhokisi yematshisi ejongeka ngendlela eyahlukileyo. Ungasebenzisa iirebhoni njengesixhobo kwibhokisi yakho yokupakisha engqongqo. Ezi ribbons ziyafumaneka kuyo yonke imibala kunye neetoni. Sijonge phambili ekunikezeleni ngezisombululo zokupakisha. Iibhokisi zezipho eziqinileyo. Iibhokisi zezipho eziqinileyo ezingokwesiko zifuna kakhulu ezo nkampani zifuna iibhokisi zokupakisha ezomeleleyo nezomeleleyo kwiimveliso zazo. Ngaphandle kwendlela entle abaziphethe ngayo, iibhokisi zethu zezipho eziqinileyo zinokusingatha ubunzima obunzima ngenxa yesakhiwo esomeleleyo. Ukusetyenziswa okuphambili kwebhokisi engqongqo kukubonelela ngobuhle kwimveliso. Ayisiyiyo loo nto kuphela kodwa ikwabalulekile ekuboniseni abathengi ngendlela ephucukileyo. Yenza umfanekiso wophawu ngokusebenzisa ubungakanani obahlukeneyo kunye neemilo kwiimveliso ezahlukeneyo. Iibhokisi eziqinileyo ezingashukumi ziyahamba kwezi ntsuku. Oku akukho lula ukugcina, kodwa kulula nokuhlangana. Ngenxa yoko, zifunwa kakhulu. Iinkampani ezininzi zokupakisha eziqinileyo zijonge ukubonelela abathengi bazo ngamava anokuthi abelane nabanye. Ibhokisi yekhandlela eqinileyo, iibhokisi zezipho eziqinileyo ezinesiciko, iibhokisi eziqinileyo ezisongekayo ezineziciko, kunye nemagnethi zizisombululo zakho. Ungayalela iibhokisi zezipho eziqinileyo kumaxabiso apheleleyo ngeBlue Box Packaging.
Iibhokisi zetshokholethi eziqinileyo ngokwezifiso
Ngubani kwindalo yonke ongayithandiyo itshokholethi? Sebenzisa iibhokisi zetshokholethi zesiko ukuze wenze imveliso yakho ibonakale kwiishelufa zayo nayiphi na ivenkile. Ezi bhokisi zeshokholethi ezingqongqo eziprintiweyo zibonelela ngobuhle nobabalo. Ngapha koko, unokongeza umtsalane kunye nokubaluleka kwimveliso yakho. Imveliso yakho engaqhelekanga ijongeka imangalisa ngakumbi kwezi bhokisi zintofontofo. Ukuyilwa kwezi bhokisi zinzima kuxhomekeke kuwe. Uzimisele kangakanani ukuthatha imveliso yakho? Ixabisa malini le mveliso kuwe? Kunye nesi sisombululo sokupakisha, unokwenza ulwazi ngophawu kwaye unyanzele abathengi abaninzi ukuba bathenge imveliso yakho. Umboniso weRaymin ubusebenzela ngokuzingca abathengi bawo kum kuneminyaka elishumi. Sisebenza njengomboneleli othembekileyo wesisombululo sopakisho kwiinkampani ezininzi zokupakisha eziqinileyo. Iqela lethu leengcali kunye nabayili bemizobo abanetalente bahlala belapha ukukunceda ukuba uyile uyilo lwakho. Ukuba sele unoyilo lwesiko lakho elingqongqo lokupakisha, sinokubenza ngcono nangakumbi kuwe. Iingcali zethu zinokwenza ukuba uyilo lwakho luphile. Nje ukuba uqinisekise uyilo lwakho, ukupakisha kwakho kuya kufakwa kwimveliso. Kwiintsuku nje ezimbalwa uya kuba nokupakisha kwakho emnyango wakho. Ukupakisha okuhle kubalulekile kwimveliso yakho. Inika isidima kunye nomtsalane kunye nokuthandeka kwimveliso yakho. Nxibelelana neengcali zethu zentengiso namhlanje ngekoteyishini yakho kwaye ziya kukubonelela ngexabiso lokupakisha elifikelelekayo kuwe. Isibhakabhaka ngumda weebhokisi eziqinileyo njengoko zisebenza ngeenjongo ezininzi. Ukungahambelani kwabo yeyona suti yabo yomeleleyo. Ingcinga yakho kuphela inokubeka umda kwezi bhokisi zexabiso. Eyona nto intle kukuba unokufumana iibhokisi ezingqongqo ngokwesiko ngokweemfuno zakho kunye nezinto ozikhethayo.
Iibhokisi eziqinileyo zeshishini
Amanye amashishini afuna ukunika izipho abathengi bawo. Nangona kunjalo, bafuna ukuba neepakethe ezingagcini nje ngokubonisa abaxumi kodwa zikwasebenza nenjongo. Bajonge izisombululo ezizinzileyo ekunzima ukuzilahla kunye nokulibala. Qaphela kwaye ubacacisele abathengi bakho ngeebhokisi zethu eziqinileyo ezinokwenziwa ngokwezifiso. Yenza uphawu lwakho ngakumbi lubonakale ngokwenza uphawu lwe logo yakho kwibhokisi nganye.
Fumana amaxabiso aphantsi ngokwezifiso
Abantu banembono ephosakeleyo ngokubanzi yokuba iibhokisi eziqinileyo zabathengisi bahlawulisa imali eninzi yokwenza ulwenziwo. Nangona kunjalo, ayiyonyani leyo; ngokuchasene nokungaqondi okuthandwayo, ziyafikeleleka. Ukufakwa kwibhokisi eblue kubonelela ngokuzinzileyo, ngexabiso eliphantsi kunye nezisombululo ezinokubakho kuzo zonke iimveliso. Yindlela yakho yokuma ngaphandle kwesihlwele kwaye wenze into eyahlukileyo ngokwenyani kumthengi wakho eya kubarhwebesha ukuba baphinde babone imveliso yakho. Ukuba ujonga isivumelwano esinokufikeleleka nge-odolo ngobuninzi bexabiso. Uku-odola ngendlela enjalo kuya kukunceda ufumane amanye amaxabiso. Oku kuyakuqinisekisa ukuba unonikezelo rhoqo lweebhokisi zezipho ezikhoyo zokunikezela.
Yenza iibhokisi eziqinileyo zaso nasiphi na isihlandlo
Kukho imeko eyandayo yeebhokisi zezipho ezenzelwe wena zemitshato, imihla yokuzalwa, amatheko, ukudibana, ukudibana, ukubandakanyeka, isikhumbuzo kunye nazo zonke ezinye iintlobo zamaxesha. Ukuba ucwangcisa umsitho wakho kwangaphambi kwexesha, unoku-odola iibhokisi zezipho eziqinileyo ngaphambi kwexesha kwiPakethe yeBhokisi eBlue kwaye wenze umsitho wakho ube wohlobo oluthile kunye nolwakheke ngokukodwa kwiibhokisi zokunika. Ukusetyenziswa okuninzi kweebhokisi eziqinileyo. Zininzi iindlela zokusebenzisa iibhokisi eziqinileyo. Yenza kwaye usebenzise ngokokhetho lwakho. Njengoko besitshilo ngaphambilana, isibhakabhaka ngumda kwezi bhokisi. Ungazisebenzisa njengebhokisi yesipho esiqinileyo, iibhokisi zezipho eziqinileyo, iibhokisi zehempe eziqinileyo, iibhokisi zokupakisha zodidi oluqinileyo, iibhokisi zezipho zomtshato eziqinileyo, okanye enye into. Ibhokisi emnyama emnyama yeyona ithandwa kakhulu kubathengi bethu. Nangona kunjalo, unokufumana umhlophe, umdaka, kunye nawuphi na umbala owuthandayo. Ubungakanani kunye nobume buya kusekelwa kukhetho lwakho kunye nokukhetha. Ngale ndlela, unokufumana iibhokisi ezingqongqo zalo naluphi na uhlobo oluhambelana neemfuno zakho. Ixabisa malini iindleko zokwenza ngokwezifiso? Lo ngowona mbuzo uqhelekileyo ezingqondweni zabathengi obagcina kulungelelwaniso. Ewe, ukufumana impendulo kulo mbuzo akukaze kube lula. Ungagcwalisa ifom ekhawulezayo kwi-intanethi kwaye ukhethe ukhetho ngokokhetho lwakho. Nje ukuba ugqibile, uya kuba unqakrazo olunye kude ufumanise ukuba iya kukuxabisa malini. Yiza neklasi kwibrendi yakho usebenzisa iibhokisi eziqinileyo ezineziciko ezivela kwiBlue Box Packaging!